सन्तुलित जीवन - स्वास्थ्य जानकारी - नारी
उच्च रक्तचाप, रगतमा अधिक ग्लुकोज, कोलेस्टेरोलस्ता कारक तत्त्वको प्रारम्भिक अवस्था पहिचान भयो भने जीवाणुबाट लाग्ने मात्र होइन, उपचार गर्न कठिन तथा महागो पर्ने धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ । तसर्थ बिरामी नभए पनि समय–समयमा डाक्टरलाई भेट्ने, रगत जचाउने, रक्तचाप नाप्ने गरे आफ्नो शरीर कुन अवस्थामा छ भन्ने थाहा हुन्छ । तर, धेरैजसो व्यक्ति बिरामी नभई डाक्टर भेट्न जरुरी ठान्दैनन् र जीवनलाई जोखिममा पार्छन् ।
अमेरिकामा मात्र धूमपानबाट हुने रोग, उच्च रक्तचाप, मोटोपन, उच्च सुगर तथा एलडिएल कोलेस्टेरोलको प्रारम्भिक अवस्था पहिचानबाट प्रतिवर्ष क्रमश: ४ लाख ६५ हजार, ३ लाख ९५ हजार, २ लाख १६ हजार, १ लाख ९० हजार र १ लाख १३ हजार जनाको ज्यान जोगाउन सम्भव छ । उक्त तथ्यांकले धूमपान एवं उच्च रक्तचाप सबैभन्दा डरलाग्दा कारक हुन् भन्ने देखाउाछ ।
समाजमा मादकपदार्थ सेवनबाट पनि कैयन्को ज्यान गैरहेको छ । सन् २००१–२००५ मा अमेरिकामा प्रतिवर्ष ७९ हजार मानिसको मृत्यु अत्यधिक अल्कोहल सेवनबाट हुने गरेको थियो । कर्सिनोजन, धूमपान, मद्यपान (अल्कोहल), ब्याक्टेरिया/भाइरसको इन्फेक्सन, विकिरण (सूर्यबाट आउने युभी अनि उपचार गर्दा प्रयोग हुने उपकरणबाट आउने), खानेकुरा, जेनेटिक्स आदि क्यान्सरका प्रमुख कारक तत्व हुन् । हृदयरोग वा रक्तनलीसम्बन्धी रोगका लागि उच्च कोलेस्टेरोल, टीजी, एलडीएल, स्ट्रेस, उच्च क्यालोरीका खानेकुरा, निष्क्रिय जीवनशैली आदि कारक हुन् ।
धूमपान नगरे निकोटिनजस्ता क्यान्सरका कारक तत्त्व हाम्रो शरीरमा प्रवेश हुादैनन् । नेसनल क्यान्सर इन्स्टिच्युटका अनुसार धूमपानबाट क्यान्सर मात्र होइन, हृदयरोग (हार्ट एटयाक) हुने सम्भावना पनि धूमपान नगर्नेको तुलनामा छ गुणा बढी हुन्छ । त्यस्तै, खानपिनमा अलिकति ध्यान दिादा अनेक समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ । माछा वा आलसको बिउमा पाइने ओमेगा–३ फ्याटी एसिड भएका खानेकुरा अनि पोलिफेनोलयुक्त फलफूल, फाइबर भएका अन्न आदि सकेसम्म सानै उमेरदेखि खाने बानी बसाले हृदयरोग तथा क्यान्सरजस्ता रोगबाट बच्न सकिन्छ । आफ्नो स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने खानेकुरा कसैको अनुरोध वा आग्रहका भरमा सेवन गर्नु हुादैन र त्यस्ता पदार्थ सेवन गर्न कसैलाई बाध्य तुल्याउनु पनि हुादैन । अनुकूल छैन भने विनम्रपूर्वक ‘नाइँ’ भन्न सक्नुपर्छ । भनिन्छ– ‘सानो सावधानीले ठूलो जोखिमबाट बचाउाछ, जुन हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि लागु हुन्छ ।’
जीवनमा सन्तुलनको धेरै ठूलो महत्त्व छ । फ्रेन्चहरू चिल्लो पदार्थ प्रशस्त खान्छन्, तर हृदयरोगविरुद्ध लड्ने पोलिफेनोल भएको रातो वाइन नियमित पिउाछन् । त्यसैले उनीहरूमा हृदयसम्बन्धी रोग कम हुने गर्छ । यसलाई फ्रेन्च प्याराडक्स भनिन्छ । रातो वाइनमा भएको पोलिफेनोलले चिल्लो खानेकुराको नकारात्मक असरलाई केही हदसम्म हटाइराखेको हुनसक्छ । रातो वाइन नपिउनेहरूले हरियो चिया अर्थात्् ग्रिन टी प्रशस्त पिउादा हुन्छ । यसरी खानेकुरामा सामञ्जस्यता राख्न सके जीवन स्वस्थ हुन्छ । स्वस्थ शरीर छ भने मात्र जिउनुको मजा लिन सकिन्छ ।
मानिसको सबैभन्दा ठूलो शत्रु उसको शरीरभित्र लुकेर बसेको रोग नै हो । यसको पहिचान जति चााडो भयो, जीवन त्यति सुरक्षित हुन्छ । मानिसले पहिले आफूलाई चिन्नुपर्छ । चिन्ने काम आफ्नो शरीरबाट सुरु हुन्छ । शरीर, मन र धनको चिनारी व्यक्तिमा हुन जरुरी छ । त्यसपछि के खाने, के नखाने, कति बेला, कुन कुरा गर्ने भनेर उचित निर्णय आफैं गर्न सकिन्छ ।
६० वर्ष कट्दा पनि मधुमेह, उच्च रक्तचापजस्ता समस्याबाट मुक्त भए उक्त व्यक्ति संसारकै सम्पन्न व्यक्तिमध्ये एक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति गर्व गर्न सकिन्छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो कमाइ हो । ५०–६० वर्षको उमेरमा शरीरमा धेरै परिवर्तन आउाछन्, विशेष गरी हर्मोन उत्पादन र कार्यमा परिवर्तन हुन्छ । यो उमेरमा स्वास्थ्यप्रति सकेसम्म बढी सचेत रहनुपर्छ ।
रोग लाग्दा आफूलाई मात्र नभै परिवारजन, समाज अनि राष्ट्रलाई नै कष्ट पुग्छ । रोग लागेपछि परिवारभित्रको सम्बन्धमा परिवर्तन आउन सक्छ विशेष गरी लोग्ने–स्वास्नीको सम्बन्धमा । सम्बन्ध टुट्न पनि सक्छ, अझ बलियो पनि हुन सक्छ । त्यसैले परिवारमा एकअर्काको स्वास्थ्यजीवनप्रति सचेत रहनुपर्छ, मर्म बुझनुपर्छ । हुन त मानिसको शरीर मृत्युपछि सबैभन्दा काम नलाग्ने चीज हो, तर बााचुञ्जेल योभन्दा प्यारो संसारमा अरू के हुन सक्छ र ? जीवनको महत्त्व कुनै ज्ञानी ध्यानीलाई भन्दा क्यान्सर लागेर बााचेकाहरूलाई सबैभन्दा बढी थाहा हुन्छ । हाम्रा धर्मग्रन्थहरू भन्छन्– मानिसको देह पाउनु नै दुर्लभ हो । तसर्थ सजिलै प्राप्त गर्न नसकिने चीजको हिफाजत गर्नुपर्छ । बालकले गल्ती गर्न सुहाउाछ, तर पाको उमेरकाले सुहाउादैन । त्यसैले उमेरसागै स्वास्थ्यप्रति बढी सचेत हुनुपर्छ ।
ऐनामा अनुहार हेरिन्छ तर आन्तरिक अनुहारबारे चासो राखिँदैन । भनिन्छ, देखिनेभन्दा नदेखिने चीज अझ मूल्यवान् हुन्छ । विचार गरौं, शरीरभित्र जीवन सञ्चालन गर्ने कस्ता–कस्ता अङ्ग हुन्छन् । सकिन्छ भने शल्यक्रिया गर्नुअघि चलिरहेको मुटु हेरौं, यो कति नाजुक छ । जस्तोसुकै कठोर मानिस पनि मुटु चलेको देखेपछि संवेदनशील हुन थाल्छ । जीवन कति संवेदनशील छ भन्ने बुझन मानिसको चलिरहेको मुटु हेर्नुपर्छ किनभने प्रत्येक मुटुको धड्कनमा जीवन अडिएको छ । आफू कति बलवान् छु भन्ने कुरा बुझ्न बाहिर देखिने मांसपेसी मात्र होइन, भित्री रूप पनि हेर्ने गरांै । म के खाादैछु, के गर्दैछु र यसले मेरो मुटुको धड्कन, मिर्गाैला र मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्न सक्छ, सोचौं । सोचौं, आफूमा के के परिवर्तन भइरहेका छन् ? सााच्चिकै ठिक त छु ?
रक्तचाप, सुगर, रगतमा चिल्लो पदार्थ, स्तन (मेमोग्राम) एवं कोल्पोस्कोपीजस्ता जााच समय–समयमा गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य जााच नगराउनु भनेको आध्यारोमा बस्नुजस्तै हो, आफैंले आफूलाई धोका दिनु हो । जीवन सबैलाई प्यारो लाग्छ र यसप्रति संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो । हामी कसैलाई भेट्दा अभिवादनसागै ‘सन्चै हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोध्ने गर्छौं । हामी ठिक छ भन्छौं, तर वास्तविक अवस्था के हो त्यसको डाक्टरी जााच गराएको हुादैनांै । ठिक नभए पनि ठिकको बहाना गर्छौं । । धेरैजसो हामी आफ्नो शारीरिकभन्दा आर्थिक अवस्थाप्रति बढी चिन्तित रहन्छौं ।
केही न केही समस्या सबैमा हुन सक्छ । तर, त्यसको समाधान डाक्टर वा अस्पतालमा मात्र हुादैन । इन्टरनेटबाट पनि धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । आजभोलि धेरै मानिससाग कम्प्युटर र इन्टरनेटको सुविधा हुन्छ, गुगलमा खोजेरै पनि आधुनिक औषधिदेखि आयुर्वेदसम्मका धेरथोर ज्ञान पाउन सकिन्छ । गुगलका ज्ञान सबै सत्य हुन्छन् भन्ने छैन, तर पनि धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी यसबाट पाउन सकिन्छ ।
धेरैजसो रोगको लक्षण, रोकथाम र उपचारबारे जानकारीसमेत गुगलले प्रदान गर्छ । यसका लागि खोजी गर्ने बानी चाहिन्छ । खोजी नगरी ज्ञान प्राप्त हुादैन । ज्ञान पढेर वा परेर मात्र थाहा हुन्छ । तर, रोगको ज्ञान परेरभन्दा पढेर थाहा हुनु राम्रो । अन्दाज वा सुनेको भरमा मूल्याङ्कन गर्ने बानी राम्रो होइन । सुनेको भरमा मात्र धारणा बनाउनु हुादैन । जानेर मात्र पनि हुदैन, जानेको कुरा अनुसरण गर्नु पनि पर्छ अनि मात्र स्वस्थ समाज निर्माण हुन्छ ।
मंसिर १२, २०७३ - जाडोमा सन्तुलित खाना
वैशाख १५, २०७३ - धावक मीरा राइको जीवन
पुस १, २०७२ - कंगनाको व्यायाम र सन्तुलित खाना
स्पाको आवश्यकता आश्विन २२, २०७४